Alliansen oo ka dhiidhiyey natiijadii baarista macaashka adeegyada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ilmar Reepalu oo baaristiisii la dhaleeceeyey.. sawir: Henrik Montgomery and Claudio Bresciani / TT.
Alliansen oo ka dhiidhiyey natiijadii baarista macaashka adeegyada
La daabacay tisdag 9 maj 2017 kl 20.26
Baaraha dawladda ayaa qaba in loo baahan yahay nidaan xadidaya saqafka macaashka howlaha adeegyada bulshada si tayada howlahaasi kor loogu qaado.
Garabka midig ee siyaasadda Alliansen (garabka mucaaradka) ayaa doonaya in la dejiyo shuruud tayo ii howlaha dar-yeelka caafimaadka, iskuullada iyo xannaanada iyagoona ka dhiidhiyey natiijada baarista la soo ban-dhigey.
Baraha dawladdu u xil-saartay ka soo baaran-degga howshan Ilmar Reepalu wuxuu aamin-san yahay in loo baahan yahay hab lagu qiimeeyo tayada, hase yeeshee ku ekaaday inuu farta ku fiiqo oo keliya goobaha howlahaa u baahan. Isagoo dhanka kale sheegay inay howlahaasi ku bixi lahayd maamul howleed aad u fara badan sidii sidii loo xaqiijin lahaa ama loola socon lahaa.
- Waxaa loo baahnaan lahaa waxaa soo kalkaaliyeyaal caafimaad, dhakhaatiir iyo macallimiin iney diiwaan geliyaan feylalka isla-markaana cabira tayada, sida uu Reepalu sheegay.
Dhanka kale wuxuu sheegay in loo baahan yahay saqaf macaashka shirkadaha ku howl-gala adeeggyada hab nolol wanaagga si loo xaqiijiyo awoodii lagu qaadi lahaa tayadooda.
Hoggaamiyaha xisbiga Liberalerna Jan Björklund ayaa sheegay in baaraha dawladdu uu gool la’aan un ku dhegay xadidaadda macaashka, isagoona ku magacaabay fikirkaa saqafka macaashka ee soosiyaaliismada.
- Waa wax aan macne ku fadhiyin in aan la shuruudeeyn karin tayada howlaha dar-yeelka caafimaad iyo tacliinta, sida uu sheegay.
"Natiijooyin horay loo carbuuntay"
Af-hayeenka siyaasadda dhaqaalaha xisbiga Moderaterna Ulf Kristersson ayaa dhaleeceeyn la mid ah baarista u soo jeediyay.
- Waa baaris horay loo carbuuntay natiijadeeda. Reepalu wuxuu og-soonaa natiijada uu la iman lahaa, wuuna ka soo hor-jeedaa xoriyadda kala doorashada, sida uu sheegay.
Fikirka xadidaadda saqafka macaashka ayaan aqlabiyad ku lahayn xubnaha baarlamanka. Halka ay xisbiyada garabka midig sheegeen iney diyaar u yihiin sidii looga wada xaajoon lahaa shuruudaha tayada iyo sidii loo hagaajin lahaa howlaha adeeegyada ee hab-nolol wanaagga, hase yeeshee haddii ay dawladdu soo hor-dhigto baarlamanka mooshin salka ku haya saqafka macaashka waxey dhanka kale diyaar u yihiin sidii ey ku joojin lahaayeen intii tabartooda ah.
Heshiis dawladdu la gaartay xisbiga Vänsterpartiet in dawladdu soo ba-dhigto inta aan la gaarin doorashada 2018 dhici doonta mooshin arrinkaa ku saab-san. Hoggaamiyaha xisbiga Jonas Sjöstedt ayaa filaya in mooshinkaasi uu ahaan doono mid taabac-san dejinta saqafka macaashka. Isagoona carrabka ku dhuftay in xisbigiisu uu dhankiisa ka soo baxay heshiiskii maadaama uu dawladda kala shaqeeyay howlaha miisaaniyadda.
- Iminka waa kaltankii dawladdu inay ka soo baxdo ballanteedii oo is wada-jir ah ey xisbiga Vänster-ka uga hor-tagaan ugaarsiga macaashka ee adeegga hab nolol-wanaagga bulshada, sida uu sheegay Sjöstedt.
Wasiirka bulshada Ardalan Shekarabi (S) ayaa sheegay in loo baahan doono tallaabooyin kala duwan oo la qaado sidii loo xaqiijin lahaa dakhliga nidaamka hab-nolol wanaagga, hase yeeshee aannu maanta oran karin in mooshinka aanu ku qeexnaan doonin saqaka macaashka.
- Qodobbada waanu isaga iman doonnaa, sida uu sheegay Shekarabi.
Reepalu: Macaashka laguma dhimi karo qiimeeynta tayada howlaha